Q:Kuthiwani ngosuku lwakho olujwayelekile lokulethwa ?
A: Ngokuvamile 5-20 izinsuku.
Q：Iyini imigomo yakho yokukhokha?
A：Khokha 50% faka kuqala bese ukhokha okusele 50% ngaphambi kokuthunyelwa.
Q：Beyinjani ubuncane be-oda lethu?
Q：Likuphi ikheli lefektri？
A：IKHELI:Isitezi sesi-4，No.3 Ukwakha，Yadi Technology Park，No.4 Hetai Road，Helong Street，Isifunda saseBaiyun，IGuangzhou，China
UCeline Wen Ucingo: +86 189 2407 0859 I-EMAIL: ngelosi@nbf.hk